Terroristgha na-eyi ọha egwu wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October? (Melite): Martin Vrijland
Terroristgha na-eyi ọha egwu wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October? (Melite)
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 22 October 2019	• 37 Comments
Ebe e si nweta: bbc.com
E nyere m taa vidiyo nke Ole Dammegard buru amụma ọkọlọtọ ụgha (Bekee: ọkọlọtọ ụgha) wakporo ndị na-eyi ọha egwu na London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam maka 23 na 24 October (Melite na ala nke ederede). Akọwaara m Ole Dammegard, onye ọzọ na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi Danish, dị ka onye mmegide na-achịkwa nke e debere na isiokwu ndị mbụ. Nke a pụtara na ọ nwere ike gosipụta eziokwu iji merie kredit ma jee ozi dị ka ebe nchekwa maka ike ọchịchị. Niile nke na-ejide onwe ya nwere ike igosipụta ihe mgbe ụfọdụ. N'ezie enwere m ihe na-ezighi ezi, mana m na-enyo enyo bụ na Dammegard bụ pawngard dị otú ahụ a na-achịkwa achịkwa.
Ọ gbachitere n'oge gara aga onye bụbu onye isi n'ihu mgbasa ozi ọzọ aha ya bụ Zen Gardner. Ọ tụgharịrị na Zen Gardner a (mgbe ọ mụtasịrị ọtụtụ afọ na usoro mgbasa ozi ọzọ) nwere ike iso ndị otu Childrenmụ nke Chukwu. Na isiokwu a en isiokwu a Akọwaara m otú ndị ọzọ na-ahụ maka mgbasa ozi si enweta nkwado mgbe niile, wee kwụsị ụgbọ mmiri ahụ. Onye ahụ tụgharịrị na mberede ịbụ onye otu òtù nzuzo nke na-eto pedophilia na nke ọzọ igbu onwe ya na-agbasa na mgbasa ozi redio (ọ gaghị adị ndụ ọzọ mgbe oge ụfọdụ gasịrị). Mụọ isiokwu ndị ahụ iji chọpụta otu esi egwu egwu nke mmegide a na-achịkwa.
Dammegard gbakwunyere ozi ya na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na-abịanụ (dịka okwu ya si dị) na nsuso nke ụfọdụ ozi na-aga ruo ọtụtụ afọ. Enweghị m ike inye aka ma mụta na ọ na-enye ya ihe ọmụma. N'ihe gbasara m, nke a pụtara na anyị nwere otu nchekwa net frontman na-oru, na mgbe ọgụ ọ bụla ndị na-achọ eziokwu nwere ike weghara otu mgbe. E kwuwerị, ọ bụ dike nke burula amụma banyere ya.
Dika m siri chee, yabụ ekwenyeghi iju anyị anya na mwakpo ndị ahụ (ụgha ọkọlọtọ) ga-abịa n'ezie. Mgbe ahụ anyị nwere ike nweta '' ọgbakọ obodo 'ọhụrụ' n'ịntanetị na ọgbakọ eziokwu ahụ ga-adị kpamkpam na ọrụ ndị a, n'ihi na ha ebidola onye ha na-eche ihu n'ihu (Ole Dammegard) n'oge. Nke a bụ otu egwuregwu nke mmegide na-achịkwa achịkwa kemgbe ọtụtụ iri afọ, ọ bụ otu a ka ọ ga-adị n'oge a.
Ole ga-eme ihe omuma ya na data sitere na ụlọ ọrụ a na-akpọ Crisis Solutions (rikicin-solutions.com). Obere afọ m na-ekwu na ọ nweta ozi ya site n'otu ọrụ ahụ na-achịkwa arụmọrụ ụgha.
Dammegard buru amụma echi na ụbọchị na-esote echi ọgụ 39 na obodo ise ahụ ekwuru. A ga-enyerịrị aha arụ ọrụ ụgha (nke a na-ekwupụta dị ka ihe omume ụjọ). Ọ bụ ihe dị ka ọrụ "Osimiri Ugo.
Na mgbakwunye, a ga-enwe mmega metụtara ọdachi n'akụkụ ụlọ ọrụ ike nuklia na mgbago ugwu Sweden, nke Dammegard na-enyo enyo na ọ ga-abụ mpụ agha iyi ọha egwu ụgha. Hụ n'onwe gị ka Dammegard si kwupụta ya nke ọma na N'ajụjụ ọnụ dị n'okpuru dị ka guru nke usoro mgbasa ozi ọzọ. Atụkwasịghị m nwoke ahụ obi, mana m kọwara na n'okpuru njikọ njikọ weebụ abụọ a kpọtụrụ aha na ihe a kpọtụrụ aha n'elu.
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu abụghị naanị mmega ụjọ, kama ọgụ (ọkọlọtọ ụgha) ga - esochi, ị ga - enwetakwa mmetụta na - ezighi ezi, ya bụ na ọrụ ahụ ga - ekwu na ọwa dịka Ole Dammegard na usoro mgbasa ozi ọzọ na - ata ụta maka ya. na òtù ndị na-eyi ọha egwu maara mmega ahụ wee jiri ọnọdụ mmega ahụ wee wepụta mwakpo ahụ n'ụbọchị ndị ahụ. Na nkenke: ọ bụ kpomkwem ndị ahụ (ndị na - achịkwa) usoro mgbasa ozi ọzọ na - ata ụta na blackjack na nke ahụ bụ ezigbo ihe kpatara iji wepụ ihe ọ bụla na - abụghị isi na ịntanetị kpamkpam. A sị ka e kwuwe, usoro mgbasa ozi ndị ọzọ bụ ndị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, wepụta ụdị mmega ahụ niile emere atụmatụ 'ihe nzuzo dị ka o kwere mee'. Mgbe ahụ enwere ike ikwu na usoro mgbasa ozi ọzọ nyeere "ndị na-eyi ọha egwu" aka na ozi nke mere na ha nri nwee ike ime mwakpo ebe mmadụ niile chere na ọ bụ mmega ahụ.
Ndị uwe ojii na ndị agha nwedịrị ike (n'ihe banyere mwakpo adịgboroja, nke a na-eche na ọ bụ eziokwu; ọkọlọtọ ụgha) na-ekwu na ndị na-achọ eziokwu na igwefoto ha na ịkọkọrịta ozi (lee oku Dammegard mere ihe nkiri), ndị otu ahụ na - eyi ọha egwu enyerela aka karịa, nke gbochiri ọrụ ha.
Ọ bụghị na nnukwu ihe iyi egwu dị otú a gosipụtara 911? Agbanyeghị mgbe ahụ enwere nnukwu mmega na-aga site na ngalaba nchekwa ikuku dị na NORAD; ndị na-ahazi ikuku dị n'igwe ma ọ bụrụ na mpụ ndị na-eyi ọha egwu. Obu ihe mere okpukpo abuo ka enwere ike igosiputa uzo mgbasa ozi di ka ihe jikotara aka ma buru agha oke na echi. Oge ozo usoro mgbasa ozi ya na mkpughe ya nke mbu banyere ihe ngosi nka bu ihe emere n'ezie.
Kedu ọnọdụ ọ ga - abụ; (1) Ole Dammegard ghọrọ onye ndu ọhụụ na mmeghari Eziokwu dịka ụgbụ nchekwa ike of (2) ọ nwere oke maka mmezu nke ihe ndị na-eyi ọha egwu na ụbọchị ọ ga-eme ka ọ pụta ìhè, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, bụ mpaghara kọfị. N'ọnọdụ ọ bụla, a ka ga-ahụ ma mmega ahụ ma ọ bụ ọgụ ọ bụla (ọkọlọtọ ụgha) ga-eme. Ọ ga-ekwekọ na atụmanya nke iyi egwu nke ọkọlọtọ adịgboroja ekwurula ebe a na saịtị ahụ. Europe nwere ike iji katuo maka nnukwu ọgba aghara a na-eme atụmatụ. N'ezie na oge Brexit ugbu a yiri ka ọ ga - adaba na esemokwu. Ha achọghị ihe ọ bụla karịa ọgba aghara; maka 'Ordo ab Chao'.
Dammegard nwere ike tọọ ntọala maka mmachibido iwu na weebụsaịtị ọzọ yana ndị uwe ojii, ndị agha na 'ndị ọrụ na-elekọta mmadụ'.
Ka ọ dị ugbu a, ọnweghị akara nke mbuso agha ma ọ bụ mmega ụjọ. Ọrụ Dammegard dị obere karịa ka m gwara ya, ha wee nweta otu ụzọ ochie ahụ. Ọ ghọghị nnukwu dike, ya na ndị na-akwado ya adịghị abụ ndị enyi maka inyere ndị na-eyi ọha egwu aka site na ịpịpụta ndị uwe ojii na ndị agha. Ee e, ọ ghọrọ nwoke nke nwere ike imebi ntụkwasị obi nke usoro mgbasa ozi ọzọ. A na m ekwukwa ọzọ, n’ihi na nke a mere tupu ọ bụrụ na akọpaghị nnukwu enyi ya ‘Zen Gardner’ dịka onye otu na onye ndu ndi otu Chukwu nke otu; òtù nzuzo nke na-akpali ụmụaka iso ụmụ nwoke nwee mmekọahụ. Achọpụtala Ole Dammegard ka ọ bụrụ shillị ugbu a gosipụtakwa nke ahụ. Nke a bụ otu n'ime atụmatụ nchekwa nke ọrụ ahụ. Ha na-ewepu pawns ha, nke webusaiti ndi ozo na-akwalite ebe niile. Ha werezie nnukwu asịrị were were ihe ha niile. Akọwawo m usoro a n'ọtụtụ isiokwu bu ụzọ. Aka m nọrọ n’okwu m.
Chee echiche, ndị dị ka Ole Dammegard na-aga n'ihu na-ekwuwapụta ọkara eziokwu dị ka echiche na-agba izu. Ha aghaghi menye echiche di nkpa site n’ibu uzo chiko otutu ndi na akwado ya ma tinye ihe ihere. A na-ejikwa Zen Gardner nọrọ n'okpuru. Ndị mmadụ dị ka Willem Felderhof (Open Mind Conference) na Ole Dammegard nwere obi ụtọ isonye, ​​kamakwa saịtị dị ka Ella Ster. Ndụmọdụ m bụ ịnọpụ ebe ndị a na-ere ahịa.
Bọchị mbipụta nke ederede mbụ: 22 October 2019 16: 47
2023 Afọ nke Europe jikọtara n'Alaeze Ottoman
Mgbasa ozi Red Cross ‘ịpị ihe ọghọm’ ezi ụzọ iji machibido ‘ịse foto ndị uwe ojii’?
Strasbourg Christmas egwu ụjọ na-agba ọsọ na-eyi ọha egwu yiri nnọọ mma timed (welcome Eurogendfor)
'Ugwu ahu bu onye n’echebe' ndu nke ndu
Tags: 5, Barcelona, nsogbu, ụgha, agba, ọkọlọtọ, osisi nuklia, london, Manchester, NORAD, mmega ahụ, Ole Dammegard, arụ ọrụ, Paris, Rotterdam, Ugo, ngwọta, obodo, egwu, agha egwu, ụgha ọkọlọtọ, ise, Sweden
22 October 2019 na 17: 25
"Gịnị ka m ga - eme?" Ya mere, agbasola ndụmọdụ Dammegard ma zere karịsịa ebe a na - egwuri egwu ma zụta ụfọdụ nri mkpọ na mmiri ọ forụ drinkingụ maka izu ole na ole.
Yabụ echela na ị nwere ike nweta nnukwu ihe ịga n’ihu site na vidio. Nke ahụ bụ ọnyà iji chọpụta mmachi na nke ahụ. N'ihi ya ndụmọdụ m: egela ntị na ikike a Ole Dammegard.
22 October 2019 na 18: 16
Ndị na - achọ eziokwu ga - adịghị anya (ekele maka - ọrụ nzuzo nke - Ole Dammegard) ndị na - eyi ọha egwu ọhụụ. Ha nyeere ndị otu ndị na-eyi ọha egwu aka inweta ozi site na iwepụta ụbọchị mmega ahụ na ọnọdụ ha ma ziga ndị mmadụ n'okporo ụzọ iji gosi ndị uwe ojii na ndị agha (ikwe ka ndị na-eyi ọha egwu zaa ha ọzọ).
Kanye okwu m!
22 October 2019 na 18: 02
Grapperhaus enweghị ike ichere ...
22 October 2019 na 18: 42
A na m anụ ebe a "bụrụ Inofizielle Mitarbeiter"? Na-echetara a bit nke oge DDR ..
Ihe nkiri ahụ site n'aka Grappermaker na-echetakwara m nke ọma otu oge, mana m ga-abụ isii na nkeji iri na ise na-ezighi ezi.
22 October 2019 na 19: 40
gịnị kpatara ihe ji sie ike, nye Herr Oberst na Ministerium für Staatssicherheit aka enyemaka ... n'ihi na anyị siri ike 😀
22 October 2019 na 21: 33
Lee akara ngosi dị n’elu aka nri nke vidiyo Ole. Gini mere iji maa atụ nke ukwuu mgbe ị na-akpọsa onwe gị onye na-achọ eziokwu. Mgbe ahụ ọ dị mkpa ịgha obi abụọ?
22 October 2019 na 22: 37
Kpamkpam marcos ndị mmadụ na-eleda ihe atụ, ọ bụ isi okwu nke mbido.
Mana kedu ihe atụ, Ella ster ma ọ bụ chọọ ịmara na ọ dịghị agbasa ihe nkiri MartinVrijland na weebụsaịtị ha site na ngosipụta Pegida, mana nke anụ ọhịa wolf na uwe atụrụ Olle damnguard.
Gịnị kpatara na enwetaghị nkwupụta Martin Vrijland na OM, n'ihi gịnị? maka enyocha blogger a, yabụ ndị mmadụ.
Dammgard ahụ na-ekwu okwu ma na-akụbanye ma ọ nweghị mgbe ọ kwadoro ihe ọ bụla dị mkpa. Ihe niile bụ ọkọlọtọ ụgha mgbe 80 bụ% hoax Ndị mmadụ dị ka Olle Dammgard bụdị ụdị kachasị njọ, ndị sabo n'okpuruala n'okpuru (mmegide nguzogide) itinye ya dịka nke ahụ, onye agha ahụ yi uwe anyị na azụ gị. gbaa.
Kwuo otu ihe ahụ dịka ndị otu na-achịkwa WantToKnow, EllaStar, Niburu.co na ọtụtụ.
Ọ bụ pawn ka Icke anaghị enyocha ya. Ọ bụrụ na ị na-ekwu ihe dị egwu banyere CIA na karịa karịa ka ị ga-atụ anya ndọghachi azụ, ị ga-eche, mba, ọ bụghị Olle, Olle nwere ike ịga n'ihu na-aga n'ihu na-eme ka ìgwè mmadụ ahụ ka batara ọhụrụ mara mma, onye sabo dara ada nke ị kpọrọ ndị dị ka Olle Dammguard. , Peck nwere ọtụtụ nku ya, na-ege ntị
22 October 2019 na 22: 50
Ọ gaghị anabata ọtụtụ na onye o doro anya na ọ na-ekpughere mkparịta ụka "miri emi" gbasara PsyOps na "Nsogbu, Mmeghachi, Ngwọta" nwere ike ịbụ ya onwe ya.
Maka nke a, ị ga-ahụ na ike na-achị achị maara na ị ga-ejigide mmegide ya ma ọ bụrụ na ịhọpụta onye ọchịchị dị ka onye isi mmegide.
Oppositiondị uwe mmegide a dara nke ọma dị ka ogbaaghara nke na-ewere otu agba na ụtọ dịka ndị mmadụ na-eche n'echeghị echiche. Nke ahụ na - eme ka o siere m ike nke ukwuu, n'ihi na onye dị ka Dammegard, mana Robert Jensen na - anwa idetuo ihe m wetara. Naanị saịtị m na-akụda, cenyere ebe niile ma tinye ya n'ọrụ. N’aka nke ọzọ, ha na-enweta ntị zuru oke.
A nnọọ ọkaibe na smart usoro.
22 October 2019 na 22: 58
Ndozigharị nke ọma, ọgụgụ isi mmụọ a na-aga n'ihu kemgbe ọtụtụ iri afọ, ikekwe ọ na-arụ ọrụ maka ọha mmadụ, mana ọ bụghị naanị maka mmadụ niile, ọ na-abawanye ụba.
22 October 2019 na 23: 39
Site n'ụzọ, echezọwo xandernieuws, akwụkwọ akụkọ ọkara-telegraph ma ọ bụ mmegide ndị a na-achịkwa dị ka enwere ndị ọzọ.
Ọ dị ka ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ niile kwesịrị ijikọ ozi Olle Dammegard. Ọ bụ ihe jọrọ njọ nke anyị niile na ọ ejedebeghị na radar mmiri ozuzo. Eleghi anya nke ahụ ga - abịa, "ọgụ radar", ịkwesịrị ịbụ onye otu Xandernieuws ma ọ bụ Telegraaf ma ọ bụ ellastar
Yabụ mgbịrịgba mkpu ga-apụ.
Maka na ọ bụrụ na Ole ga-abụ eziokwu, ọ nọ na nkata ahụ, were ya na o zighị ezi mgbe ahụ a na-akpọ ịkpali ma ọ bụ menye ụjọ, na-ekwu usoro mgbasa ozi ọzọ, mana Ole ga-agbadata
ma ndị nke ọzọ na-aga n’ihu n’ihi na ha bụ nanị ozi.
Mass akparamaagwa nke ndi mmadu ndi n’eteta
22 October 2019 na 23: 44
Ọ dị mma .. De Telegraaf na-arụ ọrụ bụ isi PsyOp na ebe nrụọrụ weebụ mmegide na-achịkwa na-arụ ọrụ nke ụgbụ nchekwa.
Ngbanị nchekwa na-ewere agba nke Vrijland dị ka chameleons.
Mkpuchi nke Facebook na ndị na-elekọta mmadụ na-eme ka ndị ọzọ. Saịtị ndị ọzọ a na-achịkwa na-akụ naanị ụgbụ nchekwa ma mechie Vrijland ịgbachi nkịtị.
Ewezuga ugbu a na Xander ... n'ihi na ugbu a, a ga-eme njikọ na Geenstijl na Jensen na mberede, n'ihi na m na-ekpughe saịtị 2 ndị ahụ mgbe niile.
23 October 2019 na 05: 33
Aghọtara m ma ghọta nke ọma ihe ị kọwara n’elu. Agbanyeghị, ihe ka jigidere m ike bụ ajụjụ kpatara saịtị a ji eji ihe atụ ama ama. Onu ogugu nke ndi huru site na ihe ngosi a gha abawanye, ya mere ihe nka. Gịnị bụ echiche gị n’azụ nke a?
23 October 2019 na 07: 14
Achọpụtakwara m na akpọtụrụ Martin Vrijland na otu ume ahụ Jensen na enweghị ụdị. Ha chere n’ezie na mmadụ niile na-akwanyere ndị mmadụ ugwu ka ha ghara ịgabiga ya.
O na - agbukwa m na n’etiti azịza nye xandernieuws, dịka ọmụmaatụ, enwere nzaghachi nke ghọtara ọnọdụ ahụ n'ezie. Ugbu a, obere mmanụ gafere, ma jiri nwayọ na-abawanye. Ha nwere ike ijide ihe ha chọrọ mana oge agaala.
Gịnị mere i ji chọọ ịmata nke a? dere, sị:
22 October 2019 na 22: 21
Ole ga-agụ ya na weebụsaịtị a? N'oge nkeji 14: 21 ọ na-ekwu, "O sitere na Nsogbu ochie, Mmeghachi, Ngwọta." Ma na-ekwughachi nke a ugboro ole na ole ọzọ.
Anyị nwere ike ịmalite ntuli aka ebe a. Kedu ihe akụkọ Martin depụtara ga-emezu? 😉
Onwem, echere m na ihe nlere 2 ka achoro maka edemede. A na-eme ka otu nnukwu buru ibu site na otu egwuregwu. A na-emewanye ntụrụndụ gaa na usoro mgbasa ozi ọzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi kachasị. Ọ bụ oge "ọmarịcha" iji gbanye usoro mgbasa ozi ndị ọzọ ka uwe ya.
Mana ọ bụrụ na ihe agaghị aga dị ka emebere ya, ndapụta 1 bụ n'ezie atụmatụ nchekwa ndabere. Maka nke a, mwakpo ndị a buru amụma adịghịdị ewere ọnọdụ. Ọ bụrụ na ihe adịghị, mgbe ahụ, a na-ebulite Ole na-akpaghị aka na ọdịmma ịmara ihe niile.
23 October 2019 na 04: 21
Ọ bụghị ihe amamihe dị na fim niile ma ghara iwepụta ihe a. Chere ruo mgbe emechara nnyocha niile wee tinye ya na ntanetị, ka ikekwe ịkọ akụkọ gbasara ya.
23 October 2019 na 08: 32
Mba, maka na a na-eji arụmụka ahụ na ndị na-eyi ọha egwu (ọ bụrụ na ihe ọ bụla mere) nwere nnukwu data .. ma ọ bụ: data nke enwere ike ịnakọta site na ekwentị site na ikike nzuzo (mgbe etinyere ngwa ọdịnala).
N'aka ozo: otutu ngwa na-enye gi ohere inweta ebe nchekwa nke obodo gị ma lelee data ahụ, yabụ, sava data buru ibu na-enwe foto na vidiyo gị.
Ọ bụrụ na "ndị na-eyi ọha egwu" nwere ike ịnweta nnukwu data (sava ​​sava), ha ga-enweta foto na vidiyo gị.
23 October 2019 na 05: 40
23 October 2019 na 08: 48
Ole diri O....siri ndi Ole. Ọ bụ ọrụ ya ịme ka ọ dị ọcha. Na nkenke, amarala ndị na - achọ eziokwu eziokwu site na Dammegard.
N’ezie ọtụtụ ga-agba ọsọ ụgbụ nchekwa a, mana ọ bụ ihe m niile.
"Thezọ kachasị mma iji chịkwaa mmegide bụ idu ya n'onwe gị"
Dịka ezigbo onye ogha, Ole Dammegard ga-ejikwa ederede ndị ahụ.
23 October 2019 na 08: 49
Alfred Lambremont Webre… onye mmegide a na-achịkwa achịkwa ikike ọzọ
23 October 2019 na 08: 58
Ole nwere ike ije ije n'ime motohome dị oke ọnụ ma nweta ahụmahụ na-enweghị atụ dị egwu.
Ọrụ ya: imata mmegbu ahụ (karịchaa 'na-atụ egwu' .. n'ihi na ọ bụghị onye ọ bụla bụ n'ezie dike dị ka Ole).
23 October 2019 na 09: 42
Hey Ole! O nwere ike ibum n’uche na ibido tufue iwu ohuru nke gbochiri nzukpo nzuko n’enyeghi ikike?
ellie dere, sị:
23 October 2019 na 06: 05
N’iche na o ziri ezi na Ole bụ onye mmegide a na-achịkwa. Ọ ma nke ahụ n’onwe ya? Ọ bụ akụkụ dị omimi na ọnọdụ dị omimi ma ọ bụ ya onwe ya bụ onye ọ na-anabataghị?
23 October 2019 na 08: 43
O yighị ka onye a na-eme ihe ọ bụla. Naanị ị ga-elele anya.
23 October 2019 na 10: 54
Egwuregwu ahụ ga-amalite ugbu a?
23 October 2019 na 17: 13
Otutu ndi mmadu chere na Ole Dammegard bu onye CIA:
23 October 2019 na 22: 32
Ọ dị mma na ọ bụ ụbọchị ụjọ ụbọchị Ole!
Shill wee daa na nkata
Wepu ya..serve..not bump back!
23 October 2019 na 22: 33
4 caroline dere, sị:
24 October 2019 na 12: 17
Naanị ọnụọgụ 39. (Ole)
24 October 2019 na 16: 33
Na Pauw, n'eziokwu, a tụlekwuru njikwa ngwa ngwa ụnyaahụ .. na-eso ozu 39 n'ime ụgbọ ala ..
24 October 2019 na 16: 35
Ahụ 39 abụghị otu dị ka mwakpo 39, mana achọpụtara m ya ozugbo ..
25 October 2019 na 19: 25
30 October 2019 na 05: 54
30 October 2019 na 12: 31
Akwa! Anyị gbochiri ya maka Ole!
Jide ya Ole!
Ekele Ole, NATO ezukọtawo ngwa ngwa iji kpochapụ ọkọlọtọ ụgha!
Chaị WauW WauWW !!! Ole bụ naanị dike!
Oke oke !!
"Nzukọ mberede na Brussels!" Ịnyịnya ibu m
Ruo ole mgbe usoro ihe atụ na / ma ọ bụ NLP ga-aga na vidiyo ndị dị otú ahụ?
A na m arịọ nke a n’ihi na achọpụtara m na ịchafụ nke Ole na-echetara m akpụkpọ anụ agwọ. Achọpụtakwara m echiche Ole na vidiyo a. Ọ nọ nso ma na-eleda ndị na-ege ntị anya.
ndị ahụ bụ usoro a na-ahụghị nke ejiri rụọ ọrụ
30 October 2019 na 06: 09
Mmelite dị n'elu, nkeji 33.39 ebe a na ihuenyo, ndị mmadụ ọchị.
" Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 3)
Ugboro abụọ igbu ọchụ nke Gina na Marinus na cinema Proné Groningen »
Nleta nile: 13.944.111
Gịnị mere i ji chọọ ịmata nke a? op Oghere ojii ahụ nke NASA sere foto bụ plasma plasma
2 igwefoto op Kedu ihe bụ nsogbu nitrogen, gịnị kpatara ndị ọrụ ugbo ji eme mkpesa na gịnị kpatara mbelata ọsọ?